Su'aal: Calooshaa layga hayaa?
Author Topic: Su'aal: Calooshaa layga hayaa? (Read 943 times)
« on: June 01, 2017, 06:09:40 AM »
asc dr ramadaan mubaarak aad baan kuu salaamayaa salaan ka dib suashayda waxay tahay calooshaa layga hayaa gaastarik ban qabaa caloosha dhanka bidix haba udarnaatee bisbaaska hadaan cuno calooshaa igu soconaysa waliba markaan saxaroonayo waxaad moodaa in bisbaas malawadka layga mariyey calooshana xanuun hada waliba suxuurta bay ixanuuntaa malays dhihi karaa gaaska nabaro igu sameeyey bal wixii talo dr bankaa sugayaa .
aad baan kuugu mahad celinayaa
Re: Su'aal: Calooshaa layga hayaa?
« Reply #1 on: January 10, 2018, 07:41:23 PM »
Maya, la isma dhihi karo nabro ayuu gaaska kugu sameeyay sababtoo calaamadaha la dareemo nabarka waxaa ka mid ah xanuun bogga iyo ku aadkiisa xagga dhabarka ah la dareemo, matag mararka qaar wax madaw ama dhiig la socdo, xanuun la dareemo markii cuntada caloosha gaarto.
Fadlan akhriso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xanuunkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=405.0
Views: 1693 March 17, 2016, 12:37:16 PM
Su'aal: Mudo 9 bilooda layga dawaynayay tb qanjidka igag dhacday?
Started by SugulleBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2120 April 06, 2012, 05:40:23 PM
Views: 979 June 09, 2018, 07:48:38 PM
Su'aal: Thyroid ma u baahanay in layga saaro mise?
Started by Abdi DeeqBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4700 December 08, 2009, 11:20:23 AM
Su'aal: Waxaa layga helaa xanuunka romititis?
Started by Hibo NuuraBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1027 June 18, 2016, 01:46:58 PM